ဘလက်ချော နှင့် Miss Universe 2012 !!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဘလက်ချော နှင့် Miss Universe 2012 !!!
ဘလက်ချော နှင့် Miss Universe 2012 !!!
Posted by black chaw on Dec 21, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, News | 31 comments
ဘလက်ချော ဆိုတဲ့ ကောင်ဟာ အသားလေး မည်းတာနဲ့ စိတ်ထားလေး မဖြူစင်တာကလွဲပြီး ရုပ်ကလေးကလည်း သနားညစ်ပတ် နဲ့ပါ…။
ဒါပေမယ့် အဲဒီကောင်ဟာ မိန်းမတွေရဲ့အလှကို ခံစားတဲ့နေရာမှာ
မိုးဟေကို ကြီးတို့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ ပပ၀င်းခင်တို့ သဇင်တို့ ရဲ့ အဆုံးစွန်သော ဆွဲဆောင်မှုတွေလောက်နဲ့ အားမရနိုင်ပဲ…
ကက်သရင်းဇီတာဂျုန်းကြီးလို ဟောလီးဝုဒ်မင်းသမီး ကလေးအမေကြီးက အစ…
(အော် မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်ကြီးကို ကြိတ်ခိုက်နေတယ်ပြောတဲ့ လူတွေထက်တော့ ဘလက်ကြီးက သာပါတယ်)
ဂေါင်းလီလို တရုတ်မင်းသမီး ရေဆေးငါးကြီးအလယ်…
(Curse Of The Golden Flower ထဲက ဂေါင်းလီရဲ့ လည်ဟိုက် တွေကို မျက်စိထဲက ထွက်ကို မထွက်ဘူးဗျာ…အာဟီး…။)
တင်းနစ်မယ် ဆီရီနာဝီလျံ ကြီး ရဲ့ မည်းနက်တောင့်တင်းတဲ့ BODY BEAUTY ကိုပါ မချန်…
(ရှရာပိုဗာ ကျတော့ ဘလက်ကြီးက မခံစားတတ်ဘူးတဲ့…အေးလေ…သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အမည်းကိုး…။)
ဟုတ်ဆိုလို လေးလို အမေရိကန် ဂိုးသမားလေးအဆုံး…
(ဒင်းကလေးသာ ရင်ခွင်ပိုက် ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ကတော့ လူတကာဝိုင်းဝိုင်းကန်ချင်ကန်ကြပေ့စေ…
ဘလက်ကြီးက ဘောလုံးပဲ ဖြစ်လိုက်ချင်သေးတာတဲ့…။)
ဒါတောင် တစ်ခုလပ်မလေး ချယ်ရီကိုးလ် တို့…၊ စီရော်နယ်ဒို ရဲ့ ရီးစား အိုင်ရီနာရှေ့ခ် တို့ မပါသေးဘူး…။
အို ဘလက်ကြီးရုပ်ကလည်း မန်စီးတီး စတား ဘာလော့တယ်လီနဲ့ နင်လားငါလားပါဗျာ…။
အင်း…အဲဒီလို မိန်းမတွေရဲ့အလှ (စိတ်ရော ရုပ်ရော ကိုပြောပါတယ်) ကို
အလှအလှတွေရဲ့ ထွဋ်ခေါင်တွေလို့ တင်စားရမယ့်…
MISS Uuiverse 2012 ရွေးပွဲကြီး ကို အမေရိကန် နိုင်ငံ Las Vegas မြို့မှာ ကျင်းပနေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း…
ဒီနှစ် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုကတော့…
အမျိုးသားဘ၀မှ အမျိုးသမီးဘ၀သို့ လိင်ပြောင်းလဲထားသူတွေကိုလည်း ၀င်ပြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါဗျာ…။
သူတို့ကလည်း မိန်းမအစစ်တွေထက်ကို ပိုလှနေတာကိုး…နော့…။
မြန်မာပြည်မှာလည်း Miss Christmas ရွေးပွဲကြီးကို စတင်ကျင်းပနေပြီဆိုတာ နားစွန်နားဖျားကြားမိထားပါတယ်…။
တစ်ချိန်ချိန်မှာ မြန်မာပြည်က Miss Myanmar တစ်ယောက်ယောက် Miss Universe ဖြစ်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါသလဲ…။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမလေးတွေကို သူများနိုင်ငံတွေက သကောင့်သားတွေ အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ အားပေးခွင့်မရကြသေးခင် သူများနိုင်ငံတွေက အလှပဂေးမလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ အားပေးထားကြမယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာလည်း ရောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း… မောင်းခတ်လိုက်ရပါတယ် တမုံ့တကားတည်း…။
မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ Star World ရုပ်သံလိုင်းက တိုက်ရိုက် တင်ဆက်ပြသသွားမယ်လို့ နားစွန်နားဖျား ကြားမိထားတာလေး သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
(ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…။ ဘလက်ချော ဆိုတဲ့ အသားမည်းမည်း လူကြီးတစ်ယောက် ကို ရွာထဲကလူတွေ မေ့သွားမှာစိုးလို့ ကို ကြီးမိုက် စတိုင်ဖမ်း…၊ ဖလန်းဖလန်း ၀င်ထလိုက်တာပါ…။)
ဖြစ်ရမယ် ဖြစ်ရမယ်……. မယ်ရွေးဦးမယ်တဲ့လား…… အိမ်မှာက အဲဒလိုဟာဒွေမရှိတော့ ဘယ်သွားကြည့်ရပါ့……..
များပြီ ကို ဘလက်။
Miss Universe က Miss USA ရသွားတယ်ဗျာ။ :harr:
ဟိုးးးးရှေးရှေးက.. မြန်မာထဲက.. ၀င်ပြိုင်ဖူးသူ(အမှတ်မမှားရင်) ၂ယောက်ရှိကြောင်း…
သဂျီးကလည်း တခါတည်း ရှာပေးတာ မဟုတ်ဘူးရယ်..
ဒီတော့လည်း ၁၅ ကျပ်ရဖို့အရေး ကိုယ့်ဘာသာ ဖန်ရတာပေါ့ နော..
ပထမ တယောက်က Miss Than Than Aye. (1959 )
Long Beach (California. USA)
Miss Congeniality ဆိုပဲ Miss Myint Myint May (1960)
the Miami Beach Auditorium in Miami Beach, Florida, USA.
ကျမ စိတ်ထင် 1960 ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်က မြင့်မြင့်မေ လို့ မဟုတ်ပဲ ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်လို့ ထင်တာပဲ။
(AA Pharmacy က မြန်မာ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့် အခုတော့ ဆုံးသွားပါပြီ) သူလည်းသွားပြိုင်ဖူးတယ်မှတ်ဖူးလို့ ၊ဆုတစ်ခုခုရမရတော့ မသိ။
Miss Universe country participation lists. Does not include no-shows, ….. 1960 Myint Myint May Miss Congeniality (tied with Louisiana) 1961 Myint Myint Khin …
MISS UNIVERSE 1959 1959 July 24. Long Beach … Burma Than Than Aye Canada Eileen Butter … Miss Welcome to Long Beach Karen Krancus, Top 15 …
ဆိုတော့.. ၅၉-၆၀-၆၁ မှာဝင်ပြိုင်သူ.. ၃ယောက်ဖြစ်ပါကြောင်း…
1961 Myint Myint Khin … ဆိုတာ.. ဒေါ်ခင်မြင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်.
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အလှမယ်ပါပဲ..။ အောင်အောင်အင်တာပရိုက်စ် ဖေါင်ဒါရဲ့ဇနီး(ကွယ်လွန်)ပါ..။
မပြောမှာကို ဘာလို့များ အစဆွဲထုတ် ရေးသွားတယ် မသိ
ဒါမျိုးကျတော့ သိတယ်… ဟိုနေ.က Printer Driver ရှာပါဆိုတော့ ရှာမတွေ.ဘူးလေးဘာလေးနဲ..
အင်တာနက်ကို နှာခေါင်းနဲ.ရှာတာကိုးးးး Printer Driver ဘယ်တွေ.မလဲ..ဟွန်…
ကျနော်ကြားဘူးတဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ တော့ နော်လီဇာ ဗင့်ဆင့်
အဲလိုသာပါလို့ကတော့ ဘယ်လောက်ထိအောင် ဖွဘုတ်ထဲမှာ
နန်းခင်ဇေယျတုန်းကတောင် တော်တော်လေး ပြောခံရတာဆိုတော့
လေးဘလက်တို့များ အားကျစရာဂျီး .. အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်မစီးပဲ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုလှတယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တယ် …. သမီးတို့များ သူများတွေ ကိုရီးယားမင်းသားချောတာလှတာ ပြောနေတာကြားတာတောင် ဘယ်သူမှန်းမသိဘူး ….. ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်မင်းသားချောတယ်မပြောနဲ့ လတ်တလော မြန်မာပြည်က မင်းသားတွေချောနေတာတောင် အစေ့အစပ် မကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူး … နောက်ဆုံး နေတိုးမှာတင် ခံစားမှုက ရပ်တန့်သွားခဲ့တယ် …..
တစ်လောက ရီစရာအဖြစ်လေးတစ်ခုရှိခဲ့တယ် … ဖေ့ဘုတ်မှာ အသိတစ်ယောက်ရဲ့အကောင့်ကို သူ့ရဲ့ညီက၀င်ပြောပြီး အဲကောင်လေးနဲ့ခင်သွားခဲ့တယ် …. နောက်တော့ သူ့ဖေ့ဘုတ်မှာ သမီးကို invited လာလုပ်တယ် … သူ့ရဲ့ အက်ဗာတာပုံက ကောင်လေးပုံ တော်တော်လေးချောတယ် … အဲဒီမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူမိတယ် … င့ါကိုဒီလောက်ချောတဲ့ကောင်လေးက စကားကိုအရေးတယူပြော invited လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေ့ါ … သူ့ကိုလက်ခံပြီး သူ့ဓာတ်ပုံတွေပြမှ အညာသားလေးဖြစ်နေတာသိရတယ် … သူများတွေကိုမေးမှ သူတင်ထားတဲ့ပုံကလည်း ကိုရီးယားမင်းသားပုံတဲ့ … သမီးအဖြစ်က အဲသလို ….
ဒါဆို ဆိုလိုတဲ့သဘောက အညာသားဆိုတာ ???????..စဉ်းစားဗျနော်…တိုင်းပြည်ကို သူ့ကျွန်ဘဝက လွတ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာလည်း အညာသားပဲ..ခု့..တိုင်းပြည်ကို ကိုယ့်ကျွန်ဘဝ ရောက်အောင် အုပ်ချုပ်ခဲ့တာလည်း အညာသားပဲဗျ နော်…ခု့ချိန်ထိ့ ခင်ဗျားတို့ ဖိန့်ဖိန့်တုန်နေရတယ်လေ..ကိုယ့်ကျွန်ဘဝက မလွတ်နှိုင်သေးဘူး.အေးဗျာ ကမ္ဘာပျက်မှာ တွေးပှုတဲ့သူပဲ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး..
“ဒင်းကလေးသာ ရင်ခွင်ပိုက် ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ကတော့ လူတကာဝိုင်းဝိုင်းကန်ချင်ကန်ကြပေ့စေ…
ဘလက်ကြီးက ဘောလုံးပဲ ဖြစ်လိုက်ချင်သေးတာတဲ့…”
ရင်ခွင်ပိုက်မဖမ်းပဲ ဟိုက အပြင်ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်မှ နောက်တစ်ခါ လေးဘလက်တစ်ယောက်
ပြိုင်ပွဲ က ပြီးသွားပြီး
အသက် ၂၀ အရွယ် “Miss USA” က သရဖူ ဆောင်းသွားပါတယ် ကဘချော ရေ။
ချစ်စရာ လေးပါ။ တစ်ချို့ က ပိန်လွန်းလို့တဲ့။
ဒါပေမဲ့ ငယ်တုန်း က ဝတုတ်မလေးက ကြီးတော့ အလှမယ်ဘွဲ့ ရတာ မိန်းကလေး ဝဝ လေး တွေ အတွက် အားကျစရာပေါ့။
အာရှနွယ်ဖွား Miss Philippines က 1st runner up ပါ။
A 20-year-old Boston University sophomore andaself-described ‘cellist-nerd’ brought the Miss Universe crown back to the U.S. for the first time in more thanadecade when she won the televised contest on Wednesday.
ထို Miss Universe အား ဦးမာဃ သိမ်းပိုက်သွားပါပြီ
(နတ်သမီး တစ်ဖက် တစ်ထောင် စီမံကိန်းအရ)
ဒီလောက်လွယ်သလား ဦးမာဃ ပြောစမ်းပါ……….ဒီလောက်လွယ်သလား….
Miss Universe ရော runner up ပါ မဆိုင်သူမကပ်နဲ့ဟေ့……………………………..
ဦးမာဃကတော့ အချစ်နဲ့စစ်မှာ မတရားတာ မရှိလို့
(အသူရာ) ဆိုလို့ ယောက္ခမ လို့ ပြောတာ
အဲဒီပွဲကို အစအဆုံး ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ် ။
အာရှသူ တွေက အာရှသူ ပုံစံ စစ်စစ် မပေါက်ဘူး ဥရောပသူ ပုံစံ နွယ်နေတယ် ။
ဥရောပသူ တွေကလည်း ဥရောပသူ ပုံစံ စစ်စစ် မပေါက်ဘူး အာရှသူ ပုံစံ နွယ်နေတယ် ။
နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အလှဆုံးတွေ က ဒီပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်တာဆိုတော့ ၊
နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အလှအပ ကိုမြင်တဲ့ အမြင်တွေ နဲနဲစီ ရွေ့လာသလိုပဲ ။
ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရောယှက်ပြီး ကမ္ဘာ့ရွာကြီး ဖြစ်လာတော့မလား မသိ ။
အစ်ကို အစ်ကို …. သများကန်မကန်တော့မသိဘူး… အခုတော့ အစ်ကိုမိန်းမက ကန်ချင်နေပြီး သူလာကြိုတာနောက်ကျလို.တဲ့……… ခိခိခိခိခိခိ
လမ်းမှာ အဲဒီ ဖြတ်ဖောက်ချုပ် တစ်ယောက်ယောက် နဲ့ တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင်
““ ဟဲ့… နင့်ဟာက ဘယ်နှစ်လက်မ ထိ ရလဲ ””
လူဂျီဒွေနော် ကြီးမှ ၀က်တက်ပေါက်နေကြဒယ် ….။ ဟိုမှာ မဒမ်ဘလက် လာနေပြီ
မသိလို့မေးပါရစေနော်..။ ဟိုနေ့က ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရတာ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းကြီး ပြောသွားတာက မယ်ဗမာတစ်ယောက် နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရာမှာ ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ အပျိုစစ်မစစ် စစ်ပေးရသတဲ့..။ အဲဒီလို စစ်ဆေးရာမှာ အိမ်ထောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အရာနဲ့တိုင်းပြီးစစ်သွားသတဲ့။ တရားလူကြီးကလည်း အပျိုဆိုပြီးလုပ်ပေးလိုက်သတဲ့..။ အမှန်က အဲဒီ မယ်ဗမာလေးက သူတို့ စစ်တပ် ဗိုလ်ကြီးလားဘာလားရဲ့မိန်းမဖြစ်နေသတဲ့..။ ဟိုမှာတော့ ဘယ်လိုစစ်မလဲတော့သူမသိဘူးတဲ့..။ အဲဒီဗိုလ်နဲ့ မယ်ဗမာ မင်္ဂလာဆောင်တောင် သူ တက်လိုက်သေးသတဲ့..။ သူဆိုလိုတာက အဲဒီခေတ်က တရားစီရင်ရေးကိုဆိုလိုတယ်ထင်ပ။ အမှန်ဆိုရင်တဲ့ ဆရာဝန်တို့ ၊ သူမမိတ်ဆွေတွေကို တရားလူကြီးကမေးသင့်တယ်ဆိုပဲ…။ ထားပါလေရှည်နေမိတယ်။ မေးချင်တာ အဲဒီလိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေ က အပျိုစစ်ရမယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ ဘယ်လို စစ်ဆေးလဲဆိုတာကိုတော့ မသိဘူး။ ဒီတော့ သိတဲ့လူများရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး..။ အဓိကက ဘာလေ့တယ်လီ။၀ယ်စမစ် လေးဘလက်ချစ်ကောင်းကျော်သိန်းကြီး အရင်ဆုံး ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်။(နောက်တာနော့်)(ဦးနေ၀င်းပြောသွားတာကိုတော့ နောက်နေ့ကျရင် ပြန်တင်ပေးပါ့ မယ်..။ သိပ်လည်းမမှတ်မိလို့)
ဆရာချောရေမှတ်သားသွားပါတယ်ဗျာ အရေးအသားများ စိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ရှုသွားပါကြောင်း
@ Thuyazaw :
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
ကြိုက်တဲ့လဘက်ရည်ဆိုင်ဝင်ကြည့် စကိုင်းနက် နဲ့5Movie ဖရီးပြပါတယ် ကိုကိုရယ်…။
@ ခိုင်ဇာ :
စကားအတင်းစပ် မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာဖြစ်ခဲ့သေးလားဗျ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ…။
စိုးမြတ်သူဇာ ကြီးအကြောင်းက ဘယ်ကပါလာတာလဲဗျ…။
အော်…ဟိုတုန်းကတော့ စိုးမြတ်သူဇာကြီးလည်း လန်းခဲ့တာပါပဲ…။
အခုလည်း အင်း…လန်းတော့ လန်းတုန်းပါပဲလေ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ…။
သူကြီးက အယ်ဒီတာ အလုပ်ကို လုပ်သွားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်ဗျာ…။
မပြောသော်လည်း ပြောသကဲ့သို့ ….။
ဟုတ်ဆိုလိုလေးက ရင်ခွင်ပိုက်ဖမ်းထားမယ် ဆိုလို့ကတော့…
@ ကိုပေါက် :
ကွန်းမန့်လေးနဲ့ ၀င်အားဖြည့်သွားတာ ကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ရေ…။
@ Yin Nyine Nway :
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ဗျာ…။
@ Khaing Khaing :
@ aanyar thar :
ကွန်းမန့်လေးဝင်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ အညာသားရေ…။
@ ko ၀ီစကီ :
နောက်ဆုံးမင်းရဲ့ ရင်ခွင်ဆီပဲပေါ့ ကိုဝီစကီ ရေ…။
@ အရီးခင်လတ် :
ပွဲက ပြီးသွားတာကို သတိမထားလိုက်မိဘူး အစ်မရေ…။
သတင်းလေးနဲ့ အားဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဗျာ…။
@ Mr. Marga :
ိစိတ်ချမ်းသာသလိုသာ စိတ်ကူးယဉ်ပါ ကိုမာဃရေ…။
@ Fall Guy :
@ Foreign Resident :
FR ကြီးအနေနဲ့ ဒီလိုပွဲမျိုး အလွတ်ခံလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ…။
@ မောင်ပေ :
အဲဒီမေးခွန်းသွားမေးလို့ ရဲစခန်းရောက်နေပါဦးမယ် ကိုကိုရယ်…။
ဒင်းက မိန်းကလေး ဖြစ်နေပါပြီဆို…။
@ နေ၀န်းနီ :
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးသွားတာအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…။
@ အာဂမောင် :
@ koaung :
ကွန်းမန့်လေး သတိတရ၀င်ရေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ကိုအောင်ရေ…။
နတ်သမီး တစ်ထောင် စီမံကိန်းနဲ့ တကယ်ယူမှာ
မိုးဟေကို အစ ဇီတာဂျုံးအလယ် ဂေါင်းလီ အဆုံးကို အားပေးသွားပါလား ကျောင်း ဒကာ ဘဘလက်ရေ….
ကျနော် တော့ ခုတလော ၀ါဆိုမိုးဦး မှ ၀ါဆိုမိုးဦး ပဲ ဗျို့….
ဟိုနေ့က on the floor ကို ကသွားလိုက်တာများ …ဟီဟိ…
အော်..အော်.. မိဂီက တင်ချာလေးကို 2012 မှာ ထားခဲ့တော့မပေါ့…
၀ါဆို က မိုးဦးကို ခိုက်တွားပီပေါ့လေ……
နားထင်နားရင်းတွေ ကျနေတဲ့ ဆံပင်တုစွပ် ကတုံးမဂျီးလား …